स्वदेश एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी - गजु Real - साप्ताहिक
स्वदेश एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी
स्वदेश : एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीमा स्वागत छ । नेपालमै पढ्न चाहनेहरूका लागि सस्तो, सजिलो र सहज सल्लाहका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् । अमेरिका जाने इच्छा छैन, बेलायत जाने रहर छैन, जापान जाने ल्याकत छैन, युरोप जाने अवस्था छैन भने आजै हामीलाई सम्झनुहोस् । स्वदेशमै पढ्नुहोस्, स्वदेशकै सेवा गर्नुहोस् ।
हाम्रो कन्सल्टेन्सीमा लाखौं कमिसन बुझाउन पर्दैन । ५–१० हजार सेवा शुल्कबाहेक कुनै कमिसन दिनु पर्दैन । पढुन्जेल तपाईंको कलेजबाट कमिसन पनि लिंदैनौं । कमिसन होइन, बरु हामी एउटा मिसन दिन्छौं । देशभित्रै अध्ययन, देशकै सेवा र देशकै मेवा ! यही मिसनद्वारा सञ्चालित स्वदेश कन्सल्टेन्सीमा तपाईंलाई पुन: स्वागत छ ।
यता १ नम्बर प्रदेशको विख्यात एग्रिकल्चर कलेजमा पढ्नुहोस्, विश्वकै प्रख्यात एग्रो इन्जिनियर बन्नुहोस् । ३ नम्बर प्रदेशको चर्चित कल्चरल युनिभर्सिटीमा एडमिट हुनुहोस्, संसारकै राम्रो सम्पदाविद् हुनुहोस् । उता पोखरामा टुरिज्म कलेज छ, त्यहीं पढेका थुप्रै युवा विश्वभरिका पर्यटकलाई नेपाल ल्याउँदैछन् ।
२ नम्बर प्रदेशको कलेज अफ इन्डस्ट्रिजमा जानुहोस् । उद्योगी बन्नुहोस् । देशभित्रका हरेक प्रदेशमा नेपाली माटो सुहाउँदा स्कुलहरू छन् । हावापानी सुहाउँदा कलेजहरू छन् । व्यवहार सुहाउँदा विश्वविद्यालयहरू छन् । न ठगिने डर † न लुटिने डर † न कुटिने डर † न मारिने डर † सरल शिक्षा पद्धति, सहयोगी गुरुहरू तथा सुरक्षित अध्ययनस्थल छाडेर कहाँ विदेश–विदेश भन्दै दौडिइरहनुभएको छ ?
आउनुहोस्, तपाईंलाई नयाँ–नयाँ कोर्स, त्यसको भविष्य र करियरका बारेमा काउन्सिलिङ गर्छौ, नि:शुल्क ! पूर्वीय सभ्यताको पढाइ गर्नुहोस्, पश्चिमा जगत्लाई तान्न सकिन्छ । जलशक्तिका बारेमा डिग्री गर्नुहोस्, विकसित राष्ट्रको ध्यान तान्न सकिन्छ । अग्र्यानिक खेतीसम्बन्धी अध्ययन गर्नुहोस्, विश्व बजारमा बिक्न सकिन्छ । कहाँ विदेश–विदेश भन्दै कुदिरहनुभएको छ ?
आउनुहोस्, हिमालको चिसो हावा खाँदै माउन्टेनेरिङ पढ्नुहोस् । पहाडको न्यानो बताससँगै कृषि पढ्नुहोस् । तराईको तातो माया लिँदै उद्योग पढ्नुहोस् । जति नै पढे पनि खानेकुरा त्यही हो । जति नै बढे पनि बस्ने धर्ती यही हो । स्वदेशमा बढेको मान्छेले स्वदेशमा पढेको सुहाउँछ । कुनै सम्भावना नभए पो एब्रोड स्टडिजको पछि लाग्नु † सम्भावनाको महासागर छोडेर कहाँ विदेशको भवसागरतिर दौडिरहनु भएको छ ?
हेर्नुहोस्, अमेरिकामा पढेर हामी के गर्न सक्छौं ? राम्रो जागिर, शान्त जीवन, सुरक्षित भविष्य...यही होइन ? चाहनुभयो भने त्यति त यहाँ पनि पाउन सकिन्छ । बढेका, बढेका, लडेका मानिसहरू त यहीं बसिरहेका छन् । ३ करोड थोपा अटाएको ठाउँमा तपाईं एक थोपा कसरी नअटाउनुहोला ?
त्यत्रो खर्च खर्च गरेर, त्यति धेरै पढेर, त्यतिका डिग्री लिएर पनि बाँच्नु मात्रै हो भने त के मज्जा र † त्यहाँ त तपाईं–हामीले धेरै के नै गर्न सक्छौं र ? विकसित मुलुकमा हामीले ठूलै काम गरे दुई–चारवटा स्टोर वा स्टेसनहरू खोल्ने हो । त्योभन्दा नयाँ काम हामी गर्न सक्दैनौं विदेशमा ।
हाम्रो देशमा जुनसुकै क्षेत्रमा हात हाले पनि सफलता हात पार्न सकिन्छ । किनभने यहाँ केही पनि भएको छैन । किनभने गर्नेहरू धेरै बिदेसिएका छन् । पानी छुनुहोस्, बिजुली निस्कन्छ । बेचेर आफू अरबपति बन्न सकिन्छ । देश खरबपति बन्छ । माटो छुनुहोस्, कृषि उत्पादन गरेर क्रान्ति गर्न सकिन्छ । सडक छुनुहोस्, आफू सम्पन्न बन्न सकिन्छ । देशलाई धनी बनाउन सकिन्छ ।
किनभने हाम्रो देशमा काम गर्ने हजारौं ठाउँ छन् । मात्र त्यो विषयका ज्ञाताहरूको अभाव छ । विज्ञहरूको कमी छ । विदेश गएपछि कमै मानिस घर फर्कन्छन्, पढ्न गए पनि, लड्न गए पनि । त्यसैले स्वेदश एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीमा आउनोस् र देशभित्रै एजुकेटेड बन्नुहोस्...भनेर भन्ने दिन कहिले आउला ?
प्रकाशित :श्रावण २६, २०७५
नेपालीको पहिलो रोजाइ : अस्ट्रेलिया
डिप्रेसनले डुबाउँदैछ अस्ट्रेलियामा नेपालीलाई
भारत अध्ययन : रोजाइमा प्यारामेडिकल तथा इन्जिनियरिङ
विदेश बसेर स्वदेश घन्काउँदै
बेलायतमा देश सम्झदै गायक अनिश पाण्डे
नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा अस्ट्रेलिया